ओबामा लेखन - एक जीवनको उत्सव
सुरुवात पत्रकारहरू प्रायः ओबामाका लेखहरू विनाश संग देख्छन्। आखिर, उनि भन्छन्, एक ओबामा यसको धेरै प्रकृति पुरानो खबर हो, एक जीवन को कहानी पहिले देखि नै रह्यो।
तर अनुभवी पत्रकारहरू जान्दछन् कि मोटाइहरू केही भन्दा बढी सन्तुष्टिजनक लेखहरू हुन्; तिनीहरू लेखकलाई एक मानव जीवनको सुरुवात गर्न को लागी समाप्त गर्न को लागी समाप्त गर्न को लागी मौका प्रदान गर्दछ, र घटनाहरु को सरल रिटेल भन्दा बाहिर विषयों र गहन अर्थ को खोज गर्न।
अनि मोटाई, सबैको बारेमा मान्छे हो, र मान्छे को बारेमा पहिलो पटक पत्रकारितालाई कति रोचक बनाएको छ भनेर लेखेको छैन?
ओबिटको लागि ढाँचा आश्चर्यजनक रूपमा सरल छ - यो मूलतः एक कडा-समाचार कथाको रुपमा लेखिएको छ, जसमा पाँच डब्ल्यू र एच हे नेतृत्वको लागी।
त्यसोभए एक obit को नेतृत्व मा शामिल हुनु पर्छ:
कहाँ व्यक्ति मर्नुभयो (यो नेतृत्वको लागि वैकल्पिक छ, र कहिलेकाहीं यसको सट्टामा दोस्रो अनुच्छेदमा राखिएको छ)
जब तिनीहरू मरे
किन वा तिनीहरू मर्छन्
तर एक obit leade पाँच डब्ल्यू र एच को बाहिर जान्छ जो व्यक्तिको जीवनलाई रोचक वा महत्त्वपूर्ण बनाइएको छ। यो सामान्यतः तिनीहरूले जीवनमा के गरे। मृतक एक कर्पोरेट कार्यकारी वा एक घरपरिवार थियो चाहे, obit leade को संक्षेप को संक्षेप (संक्षेप, बिल्कुल) को व्यक्ति को विशेष के गरे।
Obit नेतृत्व मा सामान्यतया व्यक्तिको उमेर समावेश गर्दछ।
सेन्टरेरिल हाई स्कूलमा विद्यार्थीहरूको धेरै पीडितहरूका लागि ज्याग्रा, त्रिकोणमिति र क्यालिफोर्निया बनाइएको गणित शिक्षक, शुक्रबार शुक्रबारको मृत्यु भयो। उहाँ 83 थिए।
स्मिथले बृहदान्त्र क्यान्सरको साथ लामो संघर्ष पछि घरमा मृत्यु भएको थियो।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि यी नेतृत्वले सबै आधारभूतहरू - स्मिथको व्यवसाय, उनीहरूको आयु, मृत्युको कारण, आदि आदि समावेश गर्दछ। तर यसले पनि केही शब्दहरू लेखेको छ, के उनीहरूले विशेष विद्यालय बनाउने गणितलाई उच्च विद्यालयका विद्यार्थीहरूको पीडाको लागि रोचक बनाए ।
यदि एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप देखि उमेर वा मृत्यु संग सम्बन्धित एक रोग छ भने, मौत को कारण सामान्यतया वाक्य वा दुई भन्दा अधिक obit मा अधिक दिइएको छैन, जस्तै तपाईं माथि उदाहरण मा देख्नुहुन्छ।
तर जब एक व्यक्ति जवान, वा दुर्घटना, बीमारी वा अन्य कारणहरू मार्फत, मृत्युको कारण थप पूर्ण रूपमा व्याख्या गरिनु पर्छ।
जेसन क्यारियर्स, एक ग्राफिक डिजाइनर जसले केन्द्रिय टाइम्स पत्रिकाको लागि केहि भन्दा धेरै सम्झना कवर बनाएको छ, एक लामो रोग पछि मरेको छ। उनको 43 वर्ष थियो र एड्स थियो, तिनको साझेदार, बब थमसले भन्यो।
एकपटक तपाईंले आफ्नो नेतृत्व गर्नुभएपछि, बाकी बाहिरी मूलतया व्यक्तिको जीवनको संक्षिप्त इतिहासशास्त्र खाता हो, जो व्यक्तिलाई रोचक बनाएको कुरामा जोड दिएको छ।
त्यसैले यदि तपाईंले आफ्नो नेतृत्वमा स्थापना गर्नुभएको छ कि मृतक एक रचनात्मक र धेरै मनपर्ने गणित शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, बाँकी ओबामा त्यसमा ध्यान दिनुपर्दछ।
स्मिथले प्रारम्भिक उमेरबाट गणितलाई मन पराए र उनीहरूको ग्रेड-स्कुल वर्षको माध्यमबाट उत्साहित भयो। उनले क्यानेल विश्वविद्यालय मा गणित मा गणित गरे र 1947 मा सम्मान संग स्नातक गरे।
आफ्नो स्नातकको डिग्री प्राप्त गर्न चाँडै उहाँले सेन्टेरिलिले हाई स्कूलमा सिकाउनुभयो, जहाँ उनी आफ्नो आकर्षक, एनिमेटेड व्याख्यान र अडियोविजुअल सामग्रीको अग्रगामी प्रयोगको लागि जान्दथे।
ओबामाको लम्बाई भिन्न हुन्छ, व्यक्ति र उनीहरूको सामुदायिकतामा निर्भर गर्दछ। जाहिर छ, भन्नाले मृत्यु, तपाईंको शहरमा एक पूर्व महापौर शायद स्कूल जनरेटर भन्दा बढी हुनेछ।
तर ठूला ठूला अक्षरहरू लगभग 500 शब्दहरू वा कम छन्। त्यसैले obit लेखक को लागि चुनौती एक व्यक्ति को जीवन को एकदम छोटो छोटो ठाँउ मा स्पष्ट रूप देखि योग छ।
प्रत्येक obit को अन्त मा केहि must-haves हो:
कुनै पनि जानकारी अंतिम संस्कार सेवा, अवलोकन, आदि बारे उपलब्ध छ;
मृतकको बचाइएका परिवारका सदस्यहरूको एक सूची;
कुनै पनि अनुरोध परिवार सदस्यहरूले दानियहरुलाई, छात्रवृत्ति या नींव को दान को बारे मा गरेको छ।
यहाँ समाचार समाचारहरूको लागि साक्षात्कार सञ्चालन गर्ने आधारभूतहरू यहाँ छन्
विरोध, प्रेस, र कसरी पहिलो संशोधन कलेजमा लागू हुन्छ
दुर्घटनाहरू र प्राकृतिक आपदाहरू कभर गर्ने रिपोर्टरहरूको लागि दस सुझाव
दुई-मोड हाइब्रिड के हो?
5 प्रसिद्ध क्लासिक इटालियन लेखक
यी5खेलहरूसँग तपाईंका विद्यार्थीहरू आफ्नो अर्को टेस्टको लागि तयार पारियो
ग्यालरीमा तपाईंको कला प्राप्त गर्दै
5 मई, 1941: ईथियोपिया रेजिना यसको स्वतन्त्रता
म कसरी अझ बढी लचीला प्राप्त गर्न सक्छु?
Origen: इस्पात को मानव को जीवनी
"अभियोगको लागि साक्षी"
DELUCA उपनाम र मूल नाम
के मेरो उपनाम यहूदा छ?
पारिवारिक गृह शामको महत्व (FHE)
वेल्सस्ले कलेज प्रवेश
झीलमा कैफेफिशको लागि मत्स्य पालन
ल्याटिन संक्षिप्त: एनबी अर्थ, प्रयोग, उदाहरण
Cómo hacer para invisión inmobiliaria califique para la visa visa e-2
Du'a: इस्लाम मा व्यक्तिगत अनुकरण
के हत्यारा मधुरोले जस्तै देखिन्छ?
नाजी एकाग्रता शिविरमा कपोसको भूमिका
कसरी ओलीलाई सिधा बनाइन्छ